डा. यादवले भने -‘लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेकै हुँ, कांग्रेसले नै मलाई कमजोर पार्न खोज्यो’ – Makalukhabar.com
डा. यादवले भने -‘लोकतन्त्र जोगाउन संविधान मिचेकै हुँ, कांग्रेसले नै मलाई कमजोर पार्न खोज्यो’
काठमाडौं, भदौ २ । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन आफूले अन्तरिम संविधान मिचेको स्वीकार गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सात वर्ष शीतल निवासमा बिताएका यादवले निवृत्त भएको झन्डै दुई वर्षपछि यस्तो स्वीकार गरे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई ल्याउनमा पनि तिनै ‘अरू’को हात रहेको उनले खुलाए । कार्कीलाई ल्याउने प्रस्ताव रेग्मीको भए पनि कांग्रेसबाट पनि सोही चाहना आएको उनले खुलासा गरे । आफूले राजनीतिक जीवन बिताएको कांग्रेसले नै आफूलाई कमजोर पार्न भूमिका खेलेको उनको आरोप छ ।